Diiwaangelinta musharrixiinta kuraasta Golaha Shacabka oo ka bilaabaneysa Baraawe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Diiwaangelinta musharrixiinta kuraasta Golaha Shacabka oo ka bilaabaneysa Baraawe
Maanta ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Baraawe oo ah Caasimadda dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ka billaawdaan diiwaangelinta musharrixiinta kuraas kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Musharixiinta ayaa ka qeyb galeysa doorashada 7 kursi ee ugu horreeyay ee doorashadooda lagu qabanayo degmada Baraawe, kuwaas oo kamid ah 13-ka Kursi oo guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay shaaciyeen in doorashadooda la qabanayo.
Magaalada Baraawe ayaa waxaa kusii qul qulaya madax kala duwan iyo musharrixiinta ku tartamaya kuraasta Golaha Shacabka, kuwaas oo Maanta kamid noqon doona xubnaha is diiwaangelin doona.
Maalinta Berito oo Arbaco ah ayaa dehmada Baraawe lagu qabanayaa doorashada 7 kursi halka Maalinta xigta ee khamiista la qabanayo doorashada lix kursi oo kamid ah 13-ka kursi ee guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed horay u shaaciyeen.
Diiwaangelinta musharrixiinta kuraasta Golaha Shacabka oo ka bilaabaneysa Baraawe was last modified: February 8th, 2022 by warsan radio
Golaha Wadatashiga Qaran oo la kulmay Wakiilada Beesha Caalamka
Puntland: Xal laga gaaray caqabad hortaagneyd dhameystirka doorashadii qof & Cod ee ka dhacday Saddexda degmo